IMeya yaseMsunduzi icela ukuthula edolobheni laseMgungundlovu – Sivubela intuthuko Newspaper
UMNU Mzimkhulu Thebolla imeya yaseMsunduzi wesine ephahlwe yithimba lehhovisi lakhe nelaseMPTA.
ICHIPHIZE izinyembezi imeya kaMasipala waseMsunduzi eMgungundlovu uMnu Mzimkhulu Thebolla ikhuza isihlava esihlasele eMgungundlovu esesiphenduke insakavukela umchilo wesidwaba sokubulawa kuphidelela kwabantu okungenisile kuleli dolobha okuvela ukuthi sekuyajwayelekile ukutholakala kwezidumbu zidindilizile emigaqweni yedolobha.
Ekhuluma neSivubela Intuthuko uMnu Thebolla ngezinhlelo zaseMsunduzi zokukhuthaza ukuphepha ucele amakholwa ebandla likaKhristu ukuthi lapho ezobe ehlangene khona ezinkonzweni angakhohlwa ukucela uSimakade ukuhlenga abantu baKhe abangabahlali baseMsunduzi ezimpisini ezibasobozelayo kulezi nsuku.
UMnu Thebolla ucele abantu abazobe abavakashela eMgungundlovu nomphakathi owakhele leli dolobha ukuqikelela ukuphepha kwi-Coronavirus ngokusetshenziswa kwezinsiza-kuvikela emagciwaneni ngoba leli gciwane kalikapheli. Uthe njengoba isifunda saseMgungundlovu siyisizinda se-COVID 19 bekungaba kuhle ukuthi abantu bazigcine bephephile. “Kasifuni ukubala abantu abatheleleka ngegciwane le-corona ngenxa yabantu abangazinakekeli. Sinxusa abantu ukuba baqhubeke nokuhlala emakhaya baphume uma kunesidingo. Sicela abazalwane emikhulekweni abayenzayo bakhulekele inhlalakahle kwidolobha lethu laseMgungundlovu eseliphenduke isiziba sikamaminzela ngokufa kwabantu. Sekuyajwayeleka ukuthi masonto wonke kutholakale abantu bebulewe emigaqweni yedolobha lethu. Lokhu kubulawa kwabantu kuzosixoshela izivakashi kugcine kufadabala nomnotho njengoba ukhahlamezekile ngokubheduka kwe-Covid 19 nyakenye,” usho kanje.UMnu Dumisani Mhlongo onguMqondisi wePietermaritzburg Tourism Association (MPTA) utuse izinhlelo zabo zezokuvakasha ngokuzimelela naphezu kokuba izwe liye lakhungathwa ngukubheduka kwe-COVOD 19 eyimbangela yeCoronavirus. Uthembise izivakashi ukuthi mazikhululeke ngoba umnotho wabo nezokuvakasha azifadabele ngalesi sikhathi sokhuvethe. Uncome ithimba lakhe laseMPTA ngokusebenza kanzima ukugcina ezokuvakasha zisebalazweni elihle eMgungundlovu
UHLELO LOKUFUKULA UMPHAKATHI NGEZINDLU